वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगी गरेको आरोपमा झडप, एकको मृत्यु - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगी गरेको आरोपमा झडप, एकको मृत्यु
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा एजेन्टले ठगी गरेको आरोपमा सप्तरीको एक गाउँमा दुई पक्षबीच झडप हुँदा एक जनाको ज्यान गएको छ । जिल्लाको खडक नगरपालिकामा बिहीबार राति वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगी भएको भन्ने विषयमा दुई पक्षबीच झडप हँुदा स्थानीय ७० वर्षीय मो. दाउनको मृत्यु भएको हो भने अन्य तीन जना घाइते भएका छन् । ठगीको रकमका विषयमा आपसी विवाद बढेपछि झडप भएको प्रहरीले बताएको छ ।
सरकारले एजेन्टको प्रावधान खारेज गरिसकेको छ । तर राजविराज नगरपालिका ९ जगदरीका सनाउल भन्ने व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन एजेन्टको काम गर्दै आएका थिए । उनले स्थानीय युवालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदा चाहिने भन्दा बढी रकम लिएर ठगी गरेको भन्दै स्थानीय मो. ईजराईल र मो. अक्तरसँग विवाद भई झडप शुरु भएको बताइएको छ ।
झडप भएपछि बचाउन पुगेका सनाउलका मावली पट्टीका बाजे दाउन गम्भीर घाइते भएका थिए । घाइते दाउनको उपचारको क्रममा सप्तरीको राजबिराजस्थित छिन्नमस्ता अस्पतालमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ ।
मृतकको शव पोष्टमार्टमका लागि गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पताल पठाइएको छ । घटनामा घाइते भएका तीन जना भने फरार भएको प्रहरीको भनाइ छ । घटनामा संलग्नहरुको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक माधव प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए । घटनाबारे थप अनुसान्धन पनि भइरहेको प्रहरीले बताएको छ ।
पहिले पहिले गाउँमा साँध सिमाना, विवाहवारीका विषयमा झैभगडा हुने गरेकोमा पछिल्ला दिनमा वैदेशिक रोजगारको लेनदेन र विदेशको कम्पनीमा भने अनुसार तलव नपाएको विषयमा झगडा र त्यसैका कारण मृत्यु हुने घटना बढ्न थालेका छन् ।
केही दिनअघि वैदेशिक रोजगारीमा गएको छोराले राम्रो काम र तलव नपाएको भन्दै उनका बुवाले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सहयोग गर्ने एजेन्टको कपिलवस्तुमा गोली हानी हत्या गरेका थिए । कपिलवस्तु जिल्लाको विजयनगरका ५० वर्षीय पशुपति कुर्मीले सोही जिल्लाको कृष्णनगर नगरपालिका वडा नं १० का ५५ वर्षीय पारस पुरीलाई गोली हानी हत्या गरेका थिए । उनलाई हत्या आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।